Waannu Koraynaa oo horumaraynaa
Degmada Finspång waxay ku dhex jirtaa wakhti xiiso xiiso leh. Degmadu way sii kordhaysaa, baahida loo qabo guriyeynta waa mid balaadhan, xarun caafimaad oo cusub ayaa la dhisayaa, goobaha dibada iyo goobaha madadaalada ayaa la dhisi doonaa lana horumarinayaa.
Guddiga degaanka iyo bulshada
Guddiga deegaanka iyo bulshada wuxuu diyaarinayaa qorshe guud oo cusub. Shaqada waxaa ka mid ah mas'uuliyadda diyaarinta qorshaha guud, iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo qaybaha qorshaha guud ee kala duwan sida in qorsho loo sameeyo degmooyinka, horumarinta miyiga iyo wadahadalka madaniga ah.
Xubnaha Guddiga degaanka iyo bulshada
•	Ingrid Ahlström (MP) Guddomiye
•	Stig Jansson (M) Guddomiye ku xigeen
•	Tommy Jacobsson (L)
•	Leila Marttila (V)
•	Per-Olof Hårsmar (KD)
•	Birgit Svärd (S)
•	Bo-Göran Allard (S)
•	Anna Creutz (C)
•	Leif Gustafsson (SD)
•	Lina Alm (istaraatiijiyada horumarinta qorshaha guud
Kooxda tixraaca ee loogu talagalay ka shaqaynta jawiga degmada Finspång
mas'uuliyadda ugu weyn ee kooxda tixraaca saarani waa qaybtaa khuseysaa qorshaha guud ee ay ka mid tahay horumarka gudaha magaalada Finspång iyo hareeraheeda.
Xubnaha kooxda tixraaca ee loogu talagalay ka shaqaynta jawiga degmada Finspång:
•	Herman Vinterhjärta (MP) Isugu yeedhe
•	Stefan Carlsson (V)
•	Christer Lundström (L)
•	Hugo Andersson (C)
•	Patrik Karlsson (S)
•	Ulrika Jeansson (S) KSO
•	Mats Johansson (Qorshaha bulshada iyo maareeyaha mashruuca ee magaalada Finspång)
Xubnaha Kooxda shaqalaha qorsheynta guud (masterplan)
•	Lina Alm, istaraatiijiyada horumarinta qorshaha guud
•	Mats Johansson, qorsheeye
•	Johan Malmberg, Madaxa Horumarinta
•	Helen From, madaxa dhismaha iyo bullshada
•	Magnus Pirholt, madax ku xigeenka qaybta qorrsheynta
•	Per Strannelid, agaasimaha bay'ada
•	Marika Östemar, Architectiga qorrsheyntaa